यस्तो घरमा कहिल्यै धनको कमी हुनेछैन ! | Janakhabar
यस्तो घरमा कहिल्यै धनको कमी हुनेछैन !
काठमाडौं, २१ मंसिर । शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि वास्तुशास्त्रमा अनेकौं उपाय सुझाइएका छन् । यीमध्ये यहाँ दिइएका आठ उपाय अपनाए मात्र पनि तपाईंको भाग्य चम्किन्छ ।